Umlingiswa: Isidlo sasemini (Ibhola leDrako) | Izincwadi Zamanje
Namuhla sizokhulekela kancane komunye wabalingiswa abakhohliwe kakhulu Dragon Ball yize ijusi ebingalokhu iqhubeka nokudonswa nangemuva kokuthi iDragila Ball iyeke ukuba uchungechunge oluhlekisayo. Ikona Ukudla, intombazane uGoku noKrillin abayithola ukugcina inkampani kaMaster Mutenroshi futhi, ngenhlanhla, ukuthi basebenze njengenceku eKame House.
Ngenkathi eqala ukuvela empeleni sahlangana nobuso bakhe obesabeka kakhulu, obubi, obomphangi wakudala wesithuthuthu. Futhi kuvela ukuthi isidlo sasemini siguqulwa sibe umuntu ohluke ngokuphelele ngaso sonke isikhathi lapho ethimula, lapho ukubonakala kwentombazane okuthi, ngaphezu kokuba nomzimba omkhulu kube mnandi futhi kunake, kungazelelwe kushintshe kube kowesifazane okhangayo ngokulinganayo kepha ubisi olubi kakhulu kangangokuba noGoku wayesaba.
Kwakuyisidlo sasemini "esibi", i-blonde, eyakhombisa imikhuba yobudoda neyedelelayo, yadonsa izibhamu zayo zangaphansi yahlaba konke okuphambi kwayo. Lokho kuguquka kwemizwa ngenxa yokuthimula bekungusawoti wama-gags obhekene nalomlingiswa wesibili oshiywe, njengabanye abaningi, nguToriyama. Ngaphandle kokushaya: lapho eqala ukukhombisa intshisekelo ku-Ten Shin Han (futhi ubesengaba mhlophe futhi aziphathe kahle lapho enabangani bakhe) wamlandela ekuhambeni kwakhe, ngokombono, ngoba wayengakaze abonwe, futhi nalapho, ngoba kumanga wanyamalala ngokuphelele, yize ku-anime esiyibonile okungajwayelekile kuza okwakho kamuva.
Kubukeka sengathi ukunyamalala kwakhe, ngokusho kukaToriyama uqobo, bekungenxa yokuthi ukhohliwe ngaye futhi ngesikhathi efuna ukumtakula kwakungasasona isikhathi esihle kangako, ikakhulukazi ukuze kungadala ukudideka phakathi kwesimo sakhe esimhlophe nombuzo weSuper Saiyan, osekuyincazelo engajwayelekile ejwayelekile kothisha, njengabanye abaningi, kepha kusenokwenzeka. Noma kubonakala kunjalo. Uyithandile? Okungcono futhi, ngabe ukhethe iLunch emnandi noma enolaka?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Umlingiswa: Ukudla kwasemini (i-Dragon Ball)
Ngiyabonga kakhulu ngenkokhiso, ubengumuntu ohlekisa kakhulu futhi bengimthanda. Futhi, ngesikhathi ngiyilalela, bekupholile ngoba umama wami nguyena owazwakalisa lo mlingiswa. Ngiluthande kakhulu uchungechunge lweDragon Ball futhi ngethemba lokuthi ngelinye ilanga bazolulama abalingiswa abamaka ubuntwana bukaGoku.
Ukuphakanyiswa Kwemiklomelo Ye-Harvey